Kharashka bukaan socodka ee Västra Götaland - 1177
Patientavgifter i Västra Götaland - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Ka ilaalinta kharashka-badan, daryeelka bukaan socdka banaanka, SEK 1150
Hadii aad booqatey ciyaadad nooc kasta (adigoo bukaan socod banaanka ah) iyadoo aad bixisay isku geyn SEK 1 150 oo daryeelka dawada ah iyo daaweynta mudo hal sano ah, ka ilaalinta kharashka badan ayaa shaqeyn doonta iyadoo kaadh bilaash ah lagu siin doono. Qeyb daryeelka ilkaha ah ayaa iyana lagu dari karaa taas. Taasi waxa ay saameynaysaa kaliya hadii daryeelka ilkaha loo arko inuu yahay daaweynta cudur ama waxa loo yaqaano daryeelka ilkaha ee asaasiga ah.
Ka ilaalinta-kharshka badan ee safarka bukaan socodka, SEK 1650
Gaadiidka bukaan socodka, waa inaad bixiso 1650 sanadkii si ay ka ilaalinta-kharashka badan u shaqeyso.
kharashka nuqulada qoraalka xaaladaada